गड्मदर एकाडेमीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर::Hamrodamak.com
गड्मदर एकाडेमीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर
दमक,२३ फागुन । झापाको दमक ८ मा रहेको गडमदर एकाडेमीले छैठौ बार्षिक उत्सवका अवसरमा स्वास्थ्य शिविर गरेको छ । लायन्स
क्लब युनाइटेड र माउन्ट एभरेष्टको सहकार्यमा विहिबार विद्यालयमा आँखा, दन्त र शारीरिक परिक्षण गरिएको हो । शिविरको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका डिएसपी श्यामल सुब्बाले उद्घाटन गरेका थिए । शिविरमा ३ सय ४४ जनाले सेवा लिएका थिए । एडभान्स अस्पतालका चिकित्सक डा. निमा शेर्पा, डा. संगीता घिमिरे, डा. रोजन बस्नेतले स्वास्थ्य परिक्षण गरेका थिए । यस्तै ओमशान्ति डेन्टलकी डा. सरिता श्रेष्ठले अभिभावक र विद्यार्थीको दन्त परिक्षण गरेका थिए । पाथिभरा अप्टीकलका प्रविण क्षेत्रीले विद्यार्थी र अभिभावकको आँखा जाँच गरेको विद्यालयकी प्रिन्सीपल गुणा ओझाले बताइन् ।
विद्यालयले शुक्रबार बार्षिक उत्सवका अबसरमा भजन किर्तन प्रतियोगीता सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत गर्दै छ ।
बिहि, फाल्गुन २३, २०७५ मा प्रकाशित